ဒီကပ်ကြီး မှ အမြန်လွတ်မြောက်ကျ ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ယုန်လေး – XB Media Myanmar
ဒီကပ်ကြီး မှ အမြန်လွတ်မြောက်ကျ ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ယုန်လေး
မြန်မာနိုင်ငံ ကပြည်သူတွေစိုးရိမ်နေကြတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ဖြစ်ပွားနေမှုဟာ ယခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာပါ ရောဂါပိုးရှိသူ နှစ်ဦးကို တွေ့ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ရောဂါပိုးဟာ အမေရိက န်နှင့် အင်္ဂလန်တို့မှ ပြန်လာခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ထံမှ တွေ့ရှိရတာကြောင့် လေဆိပ်မှာ လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို အဆိုတော်သရုပ်ဆောင်ယုန်လေးက ခုလိုဘြဲေ ပာပြလာပါတယ်။
သူက ” အော် တကယ်ရောက်လာပြီကို ဘာမှ မဖြစ်ကျပါစေနဲ့ အရမ်းလည်းမကြောက်ကျပါနဲ့ ဒါပေမယ့် ပေါ့လို့လည်းလုံးဝ မရပါဘူး ဒီကပ်ကြီး မှ အမြန်လွတ်မြောက်ကျပါစေ “ဆိုတဲ့ ဆုေ တာင်းပို့စ်လေး တင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ” အပြစ်ပြောတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး .လေဆိပ်မှာ ပေါ့လွန်အားကြီးတ ယ် ဗျာ . လေဆိပ်က ဝန်းထမ်းတွေကတော့ ဘယ်တတ်နိုင်မှာလဲ တာဝန်ရှိသူများရယ်😭😭😭😭 ကျွန်တော်တို့ Feb 21မှာ Bkk ကပြန်လာတယ် . အဲ့အချိန်ဆိုရင်လည်း ကမ္ဘာမှာ တ်ေတော် များ များကူးစက်နေပြီဘာအပူချိန်မှ မတိုင်းသလို ဘာဆိုဘာမှကို အစစ်ဆေးမရှိ Openbဒီနေ့ အထိ ညီလေးတွေ Pattaya က ပြန်လာတယ် ”
“မေးကြည့်တယ် စစ်ဆေးတာရှိလားဆိုတော့ အပူချိန်လေးတောင် မတိုင်းဘူး စာရွက်မှာ ဖြည့် ခိုင်းတယ်တဲ့ ဘယ်မှာနေလဲ ဘယ်ကပြန်လာတယ်ပေါ့ ဘယ်ကိုသွားမယ်ပေါ့ လူတိုင်း အမှန်ေ ရးမှာလား . ရှိမရှိ လေဆိပ်မှာ စပြီးပိတ်လိုက်ပြီးစစ်သင့်တယ် စစ်တဲ့စက် မရှိဘူးဆိုတာနဲ့ တာ ဝန်ကျေပြီလားဗျာ နိုင်ငံကြီး တစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့ ယှဉ်ရင် ဒီအတွက် ပိုက်ဆံ မသုံးသင့်ဘူးလားဗျာ . အီတလီ လို ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံတောင် တကယ်ဖြစ်တော့ မထိမ်းနိုင်တာ . တကယ်ရင်လေးစရာ”
“လေဆိပ်မှာ ဒီလိုစစ်ဆေး တားစီး အဖြေသိခဲ့မယ်ဆိုရင် . ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း တစ်လမ်ြးေ ကာင်းတော့ ရှင်းတာပေါ့ အောက်လမ်းကတော့ မတက်နိုင်ဘူး လောလောဆယ် အခုက အမေရိကန်ရယ် အင်္ဂလန်ရယ်ဆိုတော့လေဆိပ်ကဖြတ်လာတာပဲလေ . ဘယ်လောက်ထြိ ပန့်နေပြီလဲ တကယ်မတွေးရဲ စရာပါ . စိတ်တွေလည်း လေးပါတယ် အောက်လမ်းက အပြုံလို က်လည်းပါလာရင်တော့ . . .”လို့ ဆိုကာ ထပ်မံရောဂါပိုးတွေ တွေ့ရှိလာမှာကို စိုးရိမ်တကြီးနဲ့ ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ကျော်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ Covid – 19ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါနဲ့ ပတ် သက်ပြီး ကာကွယ်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံး နည်းစနစ်ကတော့ လူများတဲ့နေရာတွေမသွားဖို့၊ အကြောင်းမရှိဘဲ အပြင်မထွက်ဖို့ နဲ့ လက်ဆေးရန် မမေ့ဖို့တွေကတော့ အကောင်းဆုံးကာ ကွယ်နည်းတွေပါဘဲ။ ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်း လုပ်ဆောင်ကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
Source – yone lay ‘sfb
လူနာတှကေို တိုကျရိုကျထိတှကေု့သ နရေသူတှအေတှကျ လိုအပျတဲ့ပစ် စညျးတှေ လှူဒါနျးခဲ့တဲ့ ခတျေ နဲ့ သဈဖောငျဒေးရှငျး